Uyilo lweMemphis lubuya njengesiqhelo se-2019 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukususela kwimvelaphi yayo ngo-1980 ukuya kwangoku, Uyilo lwesitayile seMemphis yahlule uluvo lwabayili kunye noluntu ngokubanzi. Abanye bayayincoma ngobukroti bayo obunemibala, abanye bayibona ingabizi kwaye ingabalulekanga.
Imibala eyomeleleyo, ephinda iipateni zejiyometri kunye nefuthe elicacileyo lezitayile ezinje Ubugcisa bePop o I-Art Deco, Ezi zezinye zezinto ezadityaniswa ngabasunguli balo mkhwa, iqela labayili base-Italiya kunye nabayili bezakhiwo, ababefuna ukuvukela ubuNtu obulula nobungaphucukanga bama-70s.
Obu buhle busetyenziswe kuzo zonke iindawo zoyilo: ifanitshala, umhombiso, iziqwenga zemizobo, ifashoni kunye nolwakhiwo. Kakhulu ke, nangona ingumbulelo wengoma edumileyo Ukungena ngaphakathi kweSelfowuni kunye neMemphis Blues kwakhona de Bob Dylan utyekelo lubizwa ngegama leMemphis, yayingeyonto ingeyiyo UDavid Bowie, imvumi ethe yazithanda iziqwenga zale ndlela, ineqoqo elalixabisa i-1.764.900 yeedola.
Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu emva kokudalwa kwayo, iimpembelelo zayo kubugcisa kunye noyilo zisasebenza. I-Instagram okanye iPinterest Ezi zezinye zothungelwano ezisivumela ukuba sibone indlela elininzi ngayo inani labayili, imizobo kunye nabazobi ababonayo abafake uyilo lweMemphis emsebenzini wabo. Abanye balandela ngokuthembekileyo umgca wokubonwayo wee-80s, abanye baxuba imibala emitsha, thambisa amanani kunye nokusetyenziswa ngakumbi izinto eziphilayo, kungoko ke kuzalwa uyilo olutsha: iNeo-Memphis.
Ukuba ufuna ukuqala ukuyila ubugcisa besitayile seMemphis ngalo mnqonqo ukho ngoku, nantsi eminye yemigaqo esisiseko onokuyisebenzisa.
1 Sukunciphisa umda ekukhetheni imibala
2 Ulibale iodolo
3 Amanani achazwe kancinci
4 Ukuba uza kusebenzisa uhlobo lochwetheza, khetha iSans Serif
5 Kwaye ezilula, imvelaphi emhlophe
Sukunciphisa umda ekukhetheni imibala
Nangona isindululo santlandlolo sama-80s sixhomekeke ngakumbi kwimibala eyomeleleyo kunye ne-garish edityaniswe nemibala ye-pastel, ukuvuselelwa kweMemphis kuye kwahambelana nokuthanda kweli xesha, kuvumela okukhulu ubhetyebhetye ekukhetheni umbala wombala. Ngale ndlela, unokuxuba umhlaba ongaphezulu okanye iithoni ezingathathi hlangothi, ezinemibala eyomeleleyo, ngaloo ndlela kugcinwa amandla ashukumisayo kunye novuyo lwentsingiselo yentsusa.
Uyilo lweMemphis lusimahla, ukwakhiwa kunye nokuhanjiswa kwezinto ezikulo akukho mithetho. Ukuba ufuna ukuhlela amanani macala onke, ngokungathi ukhetha ukuyenza ngokulinganayo, Yonke into iya kuxhomekeka kunambitha kunye nesitayile sakho. Kukho abo baphindayo iipateni ezifanayo kububanzi nokuphakama kweteyile, kwaye kukho abo bakhetha ukwaphuka ngesiquphe ngezinto ezahlukeneyo ezingadibananga kwaphela.
Amanani achazwe kancinci
Ungasebenzisa iimilo ezinje ngoonxantathu, izangqa, izikwere, imigca egobile, kunye namachaphaza, ahlala eyimpawu yeMemphis. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuyinika into entsha kunye nokuthinta ngokwakho, endaweni yokubabamba ngendlela eqinileyo necacileyo, zama ukwenza imivumbo ibe lula kwaye ichazwe kancinci, ngokungathi amanani enziwe ngebrashi okanye ngemibala.
Ukuba uza kusebenzisa uhlobo lochwetheza, khetha iSans Serif
Izinto zokwakheka ngokwazo zinobuganga, ke siyacebisa ukuba uza kubeka isicatshulwa, kungcono sebenzisa uhlobo lwe-sans serif typeface. Ke, unokugcina umlinganiswa oqaqambileyo woyilo, kodwa ngononophelo lokulula kunye nokunambitheka okuhle, okuziqhelanisa kakuhle nezona meko zangoku.
Kwaye ezilula, imvelaphi emhlophe
Okokugqibela, ukuba ungomnye wabo bathanda uyilo olulula kunye noluncinci, iMemphis isenokukhetha ukukunika: imvelaphi ezimhlophe ezinamanani alula kumnyama, okanye ukuba uyafuna, amanye amabala athambileyo. Akukho sidingo sokugcwalisa ukubhalwa ngemibala. Ngokusebenzisa imvelaphi emhlophe, unokwenza amanani, izinto kunye nokubhaliweyo kubonakale, ngaphandle kokuphulukana nobume besitayile. Ngale ndlela, unokwenza nayiphi na into oyifunayo, ukusuka kwizimemo kunye neeposta, ukuya kwimifanekiso nakwimifanekiso yenethiwekhi yoluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imibala kwaye ingenantlonelo: Uyilo lweMemphis luyabuya njengesiqhelo
UZipi noZape babuyile bothuke bonke abantu